BurmeseBible: ကိုသာဖြူ - ပထမဆုံးကရင်လူမျိုးနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်သာသနာပြု
၁၈၂၇ ဧပြီလ ၂၂ရက်နေ့ ဆရာကြီးယုဒသန် နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတွင် "မောင်ရွှေဘေ ပိုင်ဆိုင်သည့်
သနားစရာမောင်သာဖြူ" ဟု ရေးထားသည်။ ဆရာကြီးယုဒသန်က မောင်သာဖြူကို ကရင်အမျိုးအနွယ်ဟု ဆိုသည်။ သာမန်ဥာဏ်ရည်ရှိသည်။ မှောင်မိုက်စိတ်သဘောနှင့် ပစ္စလက်ခတ်နိုင်လှ၍ ဒေါသကြီးသော စိတ်သဘာဝရှိသူဖြစ်ပြီး ဆရာကြီးယုဒသန်နှင့် လပေါင်း အတော်ကြာ နေထိုင်ခဲ့သည် .. ဟု ရေးသားထားသည်။ ဆုတောင်းခြင်းများစွာ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဘ၀သစ်သို့ စတင်နိုင်ခဲ့သည်။
ခရစ်ယန် အခြေခံကျင့်ဝတ်များကို သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးသည့်နောက် ကိုသာဖြူသည် မော်လမြိုင်မြို့ရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းငယ်တခု၏ အသင်းသားဖြစ်လာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကရင်လူမျိုးများအတွက် ပထမဆုံးသာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်သူ ဂျော့ခ်ျ ဒါနာဘုတ်မင် နှင့်အတူ ထားဝယ်မြို့သို့ ရောက်လာပြီး ၁၈၂၈တွင် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ နယ်လှည့်တရားဟောခြင်းများကို ထားဝယ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့၊ မုတ္တမ မှ ချင်းမိုင်၊ ရန်ကုန်မှ ရခိုင်ပြည် စသဖြင့် ခရီးစဉ်များ ထွက်ခဲ့သည်။ သူသည် ကရင်များ ရာနှင့်ချီပြီး ပြောင်းလဲလာစေခဲ့သည်။
နှစ်ခြင်းခံပြီးသည့်နောက် သူ့နေရပ်မှ ကရင်မိတ်ဆွေများထံ သွားရောက်ပြီး၊ ခရစ်တော်အကြောင်း ပြောကြားရန် ခွင့်တောင်းခဲ့သည်။ ပထမဆုံး ကရင်လူမျိုး သာသနာပြုလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကိုသာဖြူ ဟောကြားချက်များနားထောင်ရန် ကရင်အချို့ ၂ရက်ကြာ ခရီးထွက်၊လာရောက် ခဲ့ကြသည်။ ဒေသခံများက ကိုသာဖြူသည် ယခင်က လူဆိုးဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အခု ယုံကြည်စိတ်ချရသူ၊ အောင်မြင်သော သာသနာပြုဆရာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ကိုသာဖြူသည် သိက္ခာတင်တရားဟောဆရာ မဖြစ်ခဲ့ပါ။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာကို ကရင်ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သူတဦး ဖြစ်သည်။
မျက်စေ့ မမြင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ဖေဖေါ်ဝါရီး ၁၈၄၀တွင် ပုသိမ်မြိုအနီး၊ စံတောဝေးတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ(၉)ရက် ၁၉၄၀ တွင် ခေါ်တော်မူခြင်းကို ခံရသည်။ ဘုရားရှင်သည် သူ၏သာသာနာပြုပြုကို ကောင်းကြီးပေး၊ အောင်မြင်စေခဲ့သည်။ သူ၏ မစ်ရှင်ခရီးသည် ၁၈၂၈-၁၈၄၀ (၁၂)နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့စဉ် ရွာပေါင်း၁၂ရွာ ပြောင်းလဲ၊ ရွာသားပေါင်း ၁၂၇၀ခန့် ခရစ်တော်ကို လက်ခံခဲ့ကြသည်။ သေဆုံးပြီးနောက် အုတ်ဂူမကျန်ရစ်သော်လည်း တောင်ပေါ်မှ ကရင်ခရစ်ယာန်ရွာများမှာ ကိုသာဖြူအထမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ သူ့အနာဂါတ်အတွက် စိုးစင်မှ ပူပန်မှုမရှိပေ။ ဘုရားသခင်က သူ့အတွက် ထာဝရ နေရာအခန်းပြင်ဆင်ထားသည် ဟု ယုံကြည်သူဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ဗုဒ္ဓရာဇ၀င်မှ အင်ဂုလိမာလာလို မြန်မာပြည်သားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပုသိမ်မြို့တွင် ကိုသာဖြူကျမ်းစာသင်တန်းကျောင်း (တိုင်တရာ) ရှိသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ခန့်တွင် ဘဲဂယက်တောရွာလေးမှာနေ ကိုသာဖြူ(တိုင်တစ်ရာ)အထက်တန်းကျောင်းကို တက်ပြီး အင်္ဂလန်ကပေးသည့် ၀တ်လုံဘွဲ့ကို မြန်မာပြည်သားအနေနဲ့ ပထမဆုံးရယူနိုင်ခဲ့သော ကရင်အမျိုးသားတစ်ဦး ရှိနေခဲ့သည်။ ကိုသာဖြူ(တိုင်တစ်ရာ)ကရင်အထက်တန်းကျောင်းသည် ပညာတတ်ကရင်အမျိုးသားများ မွေးထုတ်ပေးသည့် ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်သည်။၁၈၉၀-ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမေရိကန်ပြည်၊နယူးယောက်အယ်ဗားနီးဆေးတက္ကသိုလ်ကနေ ဆေးပညာပါရဂူဘွဲ့ကို ရယူခဲ့သော ဒေါက်တာ ဆာ စံစီဖိုး သည်လည်း ကိုသာဖြူကျောင်းထွက်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
Tha Byu, Ko
(b, Bassein, Burma ca. 1778; d. Sandoway, Burma 9Sep 1840)
First Karin Baptist Christian and ardent evangelist and missionary.
Born in U Twa village near Bassein, Ko Tha Byu lived with his parents until he was 15. He was thena"wicked and ungovernable boy," and when he left his parents he becamearobber andamurderer. According to his own confessions, he murdered no fewer than 30 of his fellow countrymen. Heavily in debt, he was sold asaslave in the Moulmein bazaar and bought by Shwe Be,aBurmese Christian and disciple of Adoniram Judson" (the first American Baptist missionary to Myanmar). Shwe Be tried to teach him but made little progress. Later, Judson took charge of him and taught him to read and write.
In the 22 Apr 1827 entry in his journal, Judson recorded, "Maung Tha Byu,apoor man belonging to Maung Shwe Be". Judson described Tha Byu as a"a Karen by race, imperfectly acquainted with the Burmese language, and possessed of very ordinary ability. He has been about us several months and we hope that his mind, which is exceedingly dark and ignorant, has begun to discern the excellency of the religion of Christ." Judson recorded that Tha Byu had "a diabolical temper, " but after much prayer and hard work there wasabreakthrough.
After he had been taught the Christian doctrines, Tha Byu applied for membership in the then small Burmese church of Moulmein. The matter was postponedawhile, and later he accompanied George Dana Boardman (the first American Baptist missionary to the Karens of Burma) to Tavoy, where he was baptised on 16 May 1828. From the day of his baptism to the day of his death, he never slackened his labors in preaching Christ in places where the Gospel had never been heard, from Tavoy to Thailand, from Martaban to the borders of Chiang Mai from Rangon to Arakan. Tha Byu becameafaithful and successful missionary,adistinguished instrument in the hands of God to arouse the attention of Karen race to baptized, he lived to see hundreds upon hundreds follow in his steps, in whose conversion he had playedasignificant part.
After his baptism, Tha Byu asked for permission to go and tell the little he knew to his Karen friends. After hearing Tha Byu, people traveled two days or more to visit teacher Boardman in Tavoy and learn more of Christianity. Tha Byu was an unceasing and tireless pioneer preacher, an itinerant evangelist. A contemporary mission worker said of him, "Ko Tha Byu was an ignorant man; yet he did more good than all of us, for God was with him". He was never ordained. "He was not adapted for the pastoral office," cryptically remarked Francis Mason the first translator of the Bible" into Karen.
Rheumatism and blindness stopped Tha Byu's itinerancy. In Feb 1840, he accompanied Rev Abbott and his family (the first missionaries to the Karens of Bassein) to Sandoway. On arrival, he was sent toasmall Karen village nearby, where he remained until his death on9Sep 1840. No mound marks his grave, but the eternal mountains are his monument, and the Christian villages upon the hillsides are his epitaph.
God fully and richly blessed Tha Byu's ministry. After 12 years (1828-40) of his labor, there were 1270 members belonging to Karen Baptist churches scattered overalarge area in dozens of villages. To the last, he did not have one anxious though about his future. When he was asked, his usual reply was, "God will preserve me".
Mason, Francis, Ko Tha Byu, the first Karen Christian (1983). Ya Ba Toh Loh, Memoir of Saw Ko Tha Byu (In Karen) (1950)
CLIFFORD KYAW DWE
Scott W. Sunquist, editor
David Wu Chu Sing and John Chew Hiang Chea, associate editors.
@2001 Wm, B Berdmans Publishing Co. Michigan, USA
Ko Tha Phyu (High School) and Bible School in Pathin Town is famous. Many Karen educated people attended this school.
Posted by Witmone at 5:50 AM